पोखरी निरीक्षण गर्न गएका वडाध्यक्षको एक्साभेटरको चालकसंग वि’वाद भएपछि…! – Classic Khabar
पोखरी निरीक्षण गर्न गएका वडाध्यक्षको एक्साभेटरको चालकसंग वि’वाद भएपछि…!
June 26, 2021 85
सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–३, भक्तिपुरका वडाध्यक्ष सूर्य कुमार श्रेष्ठको ह’ ‘त्या भएको छ । वडाध्यक्ष श्रेष्ठको शुक्रबार राती जेसिबी चालकसँग वि’वाद भएर जेसिबीले ठक्कर दिई ह’ ‘त्या ग’रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गवाले जनाएको छ । भक्तिपुरमा केही दिनदेखि पुरानो सरकारी पोखरी खनेर स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको थियो ।
राती अबेरसम्म वडाध्यक्ष श्रेष्ठ, जेसिबीका ठेकेदार प्रेमराज दाहाल र जेसिबी चालक रविन भन्ने हर्क बहादुर तामाङले नजिकैको होटलमा सँगै खाजा खाएर बस्नु भएको थियो । शुक्रबार राती १० बजेपछि खाजा खाएर फर्किने क्रममा जेसिबीका चालक तामाङसँग वडाअध्यक्ष श्रेष्ठको वि’वाद भयो ।
वि’वाद गर्दा गर्दै पोखरी खनेको स्थानमा पुगेपछि चालक तामाङले जेसिबी चलाएर वडाध्यक्ष श्रेष्ठलाई जेसिबीको बकेटले ठ’क्कर दिएर ल’डाएको र त्यसपछि माटोले पुरेको पाइएको सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सन्तोष सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो । उहाँले घटनाबारे पूर्व योजना नभई आवेशमा आएर घटना गराएको देखिएको बताउनुभयो ।
घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ तत्कालै प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेर अ’चेत अवस्थामा रहनु भएका वडाध्यक्ष श्रेष्ठलाई जिल्ला अस्पताल मलङ्गवा पु¥याएपनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जेसिबीका ठेकेदार ईश्वरपुर नगरपालिका–३, कै ३५ वर्षीय प्रेमराज दाहाल र जेसिबीका चालक बरहथवा नगरपालिका–१, का ३८ वर्षीय रविन भन्ने हर्क बहादुर तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
दाहाललाई घटना लगत्तै नियन्त्रणमा लिइएको र फरार रहेका जेसिबी चालक तामाङलाई शनिबार बिहान पौने ६ बजेतिर लालबन्दीबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरु दुवैलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गवाको हिरासतमा राखिएको छ ।
मृतक अन्जादी ५५ वर्षीय वडाध्यक्ष श्रेष्ठको शव पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल मलङ्गवामा राखिएको छ । गोरखापत्रमा यो खबर छ ।
Prevइन्द्रावतीमा आएको बाढीले बगायो मेलम्चीको तीन तले घर
Nextभ्वाइस अफ नेपालमा नयाँ कोच, दीप श्रेष्ठ ठाउँमा अब राजेशपायल राईले सम्हाले कार्यभार